Akụkọ nke Web na Social Analytics | Martech Zone
Anyị hụrụ n'anya infographics… ma ọ bụrụ na ịchọpụtaghị, anyị nwere otu edemede naanị maka Infographics (yana nke ya ndepụta). Anyị hụrụ akwụkwọ ozi n'anya nke ukwuu nke na anyị amalitela ịzụlite nke anyị yana ụfọdụ maka ndị mmekọ na ndị ahịa anyị. Onye a mepụtara maka onye ahịa anyị, Webtrends, ma nye akụkọ ihe mere eme nke mgbasa ozi mmekọrịta nchịkọta na nchịkọta weebụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkekọrịta Infographic a na saịtị gị, ị nwere ikike anyị zuru oke ma ọ bụrụhaala na ị nyeghachi njikọ na post a na Webtrends. Ndị ọrụ anyị mepụtara ihe ọmụma a, DK New Media.
Nnukwu nwute, Marco! Netscape logo na-abịa 🙂
Nwere ike ịdepụta isi mmalite gị? Nke ahụ kwesịrị ịbụ ụkpụrụ omume mgbe ị na-eke infographic.
Jun 25, 2011 na 2:11 AM
Nke ahụ bụ ụdị nke infographics na-enye ọnụ ọgụgụ. Agbanyeghị, data a emetọghị ma ọ bụ gbakọọ data nke chọrọ nkwenye. Ndepụta nke ihe onwunwe ga-adị ogologo karịa nke Infographic n'onwe ya. Ọ bụrụ n'ịgụ ihe ọ bụla, ị ga-ahụ na anyị na-ezo aka na isi mmalite ebe ọ dị mkpa (Wikipedia, Gartner, Aha ụlọ ọrụ, wdg). Lelee akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ahụ.
Antoine Nwoke nwere mmasị nwoke
Aug 1, 2011 na 8:53 PM
Naanị obere mgbazi naanị FYI, XiTi (ugbu a na Internetntanetị) malitere na 1997, ọ bụghị 2004
Aug 1, 2011 na 9:03 PM
E lekwasịrị anya na mwepụta nke ụlọ ọrụ mana na nchịkọta nyocha ewepụtara.